Ungayisebenzisa Kanjani Intengo ye-Algorithmic ukukhulisa inzuzo | Martech Zone
ULwesihlanu, February 12, 2016 ULwesihlanu, February 12, 2016 Douglas Karr
Njengomthengisi welebula wangasese, inhloso yakho ukukhulisa inzuzo kumikhiqizo yakho yelebula yangasese. Intengo yinto ebaluleke kakhulu ukuthinta inzuzo yakho yonke - ngakho-ke idinga ukunakekelwa okugcwele. Kepha wazi kanjani ukuthi awunamanani entengo ngemikhiqizo yakho yelebula yangasese iphansi kakhulu?
Kungenzeka ushiye imali etafuleni ongalazi. Noma mhlawumbe ubiza kakhulu futhi awukhiqizi ukuthengisa okuningi ngangokunokwenzeka. Ngenkathi ilebula langasese liyindlela yokukhulisa ibhizinisi lakho ezweni lanamuhla lokuncintisana online, ukuhlala phambili komncintiswano kuyisihluthulelo sempumelelo yakho.
Isixazululo sentengo yelebula langasese le-Feedvisor senzelwe ngokukhethekile abathengisi bamalebula abazimele - njengawe. Ama-algorithms wethu wokuzifundela okuzenzekelayo azokusiza ukukhulisa amamajini wakho wenzuzo yemikhiqizo yakho yelebula yangasese, ekugcineni kusheshise ukukhula kwebhizinisi lakho lelebula elizimele.
Kungani udinga intengo ye-algorithmic yemikhiqizo yakho yelebula yangasese
Inzuzo enhle - Ngeke usaqagela amanani akho. Amanani we-algorithmic aqeda ubungozi bokuthi ushiye imali etafuleni ngokuthola inani eliqondile lokuqinisekisa inzuzo enkulu ngomkhiqizo ngamunye welebula lakho langasese.
Okonga isikhathi - Ngeke kusadingeka ukuthi usethe izintengo zakho ngesandla. Ukuphatha intengo yomkhiqizo wakho ngamunye kudla isikhathi esiningi, futhi kungathatha amahora wosuku lwakho. Kuze kube manje, asikho isisombululo sentengo esivele sikhona semikhiqizo yelebula yangasese. Isixazululo sethu esizenzakalelayo sikhulula isikhathi sakho ukuze ukwazi ukugxila ekugcwaliseni kabusha, ekuhloleni nakweminye imisebenzi ebalulekile edingekayo ukusheshisa ukukhula kwebhizinisi lelebula lakho langasese.
Ukulawula nokuzinza - You ukulawula yokusungula yakho kanye emakethe.
Esikhaleni somthengisi we-Amazon esingalindelekile - unamandla aphelele okuthengisa noma ukushesha kangakanani ukuthengisa imikhiqizo yakho - kuya ngezimo zebhizinisi lakho elihlukile.
Isebenza kanjani intengo ye-algorithmic?
Akunasidingo sokufaka noma yimiphi imithetho noma ukukhomba noma yimiphi imikhiqizo eyisithenjwa. Ama-algorithms wethu wokuzifundela aqala ngokushesha nje lapho ufaka intengo yakho yophahla nentengo yaphansi, futhi konke okunye kuzenzakalelayo.
Ungasetha idethi yokuphuma kwesitoko noma usitshele ukuthi zingaki izinto ongathanda ukuzithengisa ngosuku.
Ithagethi idethi engaphandle kwesitoko - Sitshele usuku lwakho olukhishelwe ngaphandle kwesitoko, futhi ama-algorithms ethu azocacisa intengo efanelekile nejubane lokuthengisa elizoqinisekisa ukuthi uthengisa ngalolo suku.
[box type = "note" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Isibonelo: Uma kufanele uthole isitoko esisha esivela kumkhiqizi wakho ngenyanga yokuqala ezayo futhi udinga ukususa isitoko sakho samanje ngaleso sikhathi, sazise usuku oluqondile futhi sizoqinisekisa ukuthi sonke isitoko sakho sisuliwe intengo engaba khona, ngaphambi kokungena kwesitoko esisha. [/ box]
Okuqondiwe nge-velocity - Qiniseka ukuthi awuthengisi ngejubane elikhulu noma ubhajwe ngesamba esihamba kancane. Sitshele ukuthi zingaki izinto ofuna ukuzithengisa ngosuku, bese uvumela ama-algorithms ethu anakekele okusele.
[box type = "note" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Isibonelo: Isidingo semakethe sesinyukile futhi uthengisa izinto eziningi kunalokho obekuhlelele. Ngaleli zinga, uzothengisa ngesonto kodwa isitoko sakho esisha sifika kuphela esikhathini samasonto amabili. Gwema ukulahlekelwa yirensi lekhasi lakho ngokuqinisekisa ukuthi awuthengisi uze ungene kokuthengiwe okusha. Lawula ijubane lokuthengisa kwakho ngokusitshela ukuthi zingaki izinto ongathanda ukuzithengisa nsuku zonke. [/ Box]
Izinzuzo Ezengeziwe Zabahlinzeki
Njengengxenye ye Iphakethe lelebula elizimele le-feedvisor, uzothola futhi:
Our ibhizinisi suite suite - Equkethe amadeshibhodi enembile, imibiko ejulile nezixwayiso zansuku zonke zokukusiza wenze izinqumo zebhizinisi ezinembile:
Ideshibhodi inikezela ngokubuka konke kwe-panoramic kanye namakhono wokujula okujulile, ikunikeze ukuhlaziywa okunothile kwezindleko zakho, ukuthengisa, amanani esitokisi nesimo semakethe.
Imibiko yethu gqamisa isethi ecebile yedatha ongayisika futhi uyidayisi ngokuya ngamapharamitha ahlukile, ngokuhambisana nezidingo zebhizinisi lakho.
Izexwayiso qokomisa imininingwane ebalulekile, njengokuthi lapho izinto ezithile zingasenenzuzo, lapho izinto zakho ezithengiswa kakhulu ziphela esitokweni, nokuthi kufanele uchithe nini ukusungula okuhamba kancane.
A umphathi ozinikele wokuphumelela kwamakhasimende ngubani ozokuqondisa ekukhuliseni ibhizinisi lakho elebula ngasese. Ithimba lethu lokuphumelela kwamakhasimende lakhiwe ngochwepheshe be-Amazon kanye nochwepheshe bezezimali - ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi usesandleni esifanele.
Bona ukuthi i-Feedvisor ingayifinyelela kanjani ebhizinisini lakho lelebula elizimele le-Amazon!
Sheshisa i-Amazon Private Label Business yakho
Tags: intengo ye-algoAmanani we-algorithmicumeluleki
Ungawakha Kanjani Umkhankaso Wokuzibandakanya kabusha Kwababhalisile Abangasebenzi